Star Wars™: Galaxy of Heroes 0.16.453784 Android အတြက္ Aptoide APK အား ေဒါင္းလုပ္ ျပဳလုပ္ပါ
ဗားရွင္း 0.16.453784 လြန္ခဲ့ေသာ 1 ပတ္က
ဂိမ္းမ်ား တကိုယ္ေတာ္ Star Wars™: Galaxy of Heroes
Star Wars™: Galaxy of Heroes ၏ ေဖာ္ျပခ်က္
သင်နဂါးငွေ့တန်း၏မာစတာဖြစ်လာမှအထင်ကရနေရာများအနှံ့သင်အကြိုက်ဆုံးမှောင်မိုက်နှင့်အလင်းဘက်ခြမ်းသူရဲကောင်းများနှင့်အတူစစ်တိုက်ခြင်းအဖြစ်သင့် Star Wars ™အိပ်မက်နေထိုင်ကြသည်။ Create နှင့်တစ်ကိုယ်တော်™ထံမှအသစ်သောဇာတ်ကောင်အပါအဝင်တိုင်းခေတ်ကနေဇာတ်ကောင်, ကိုသုံးပြီးသင့်ရဲ့အိပ်မက်အသင်းကိုစိတ်ကြိုက်: တစ်ဦးက Star Wars ™ပုံပြင်, Star Wars ™: အဆိုပါနောက်ဆုံး Jedi ™နှင့် Rogue တစ်ခုမှာ™: တစ်ဦးက Star Wars ™ပုံပြင်။ , အလှည့်-based RPG စစ်ဆင်ရေးအတွက်ထိတွေ့ဆက်ဆံကုမ္ပဏီကြီးအကြီးအကဲတွေ, ထောင်စုနှစ်စွန်ငှက်နဲ့တူအာကာသအတွင်းလေယာဉ်မှူးဒဏ္ဍာရီသင်္ဘောများထိပ်တိုက်ရင်ဆိုင်, နက်ဖြန်အဆင့်သင့်ရဲ့နည်းဗျူဟာယူပါ!
အဆုံးစွန်တွင် TEAM CREATE
သူပုန်ခေါင်းဆောင်များ? Imperial မှခှနျအား? သင်က Star Wars ™စကွဝဠာထဲကနေသူရဲကောင်းများနှင့်အခြားဇာတ်ကောင်စုဆောင်းနေချိန်မှာသင်ကအထက်တန်းလွှာအလင်းနှင့်မှောင်မိုက်ဘက်အသင်းများကိုတည်ဆောက်အဖြစ်ရွေးချယ်ဖို့အခမဲ့ပါပဲ။ သင့်ရဲ့မဟာဗျူဟာဖွံ့ဖြိုးနှင့်ဤမော်ကွန်း RPG အတွက်သော့ချက်ရွေ့လျားစေ။ ဖြည့်စွတ်အရည်အချင်းများနှင့်အတူအသင်းဖော် Pick နှင့်မယှဉ်နိုင်တဲ့အသင်းနှင့်အတူစစ်တိုက်သွား!
က Galaxy မဟာဘွဲ့ဖွေစျလာ
ရှုံးနိမ့်ဆန့်ကျင်ခြင်းနှင့်သင်တစ်ဦးဝေး cantina အခြေစိုက် Galactic hologames လွှမ်းမိုးအဖြစ်ထိပ်မြင့်တက်။ သငျသညျ ပို. ပင်အစွမ်းထက်တိုက်ခိုက်မှုများနှင့်ပိုကြီးအနိုင်ပေးများအတွက် play အဖြစ်သင့်သူရဲကောင်းများ '' စွမ်းရည်အဆင့်မြှင့်အားဖြင့်သင့်တိုက်ခိုက်ရေးနည်းဗျူဟာတိုးတက်စေပါ။ ထိုအခါနဂါးငွေ့တန်းအောငျနိုငျဖို့ Squad Cantina စစျပှဲမြား, PvP Squad Arena နှင့် Squad ပြိုင်ပွဲများအတွက်အခြားကစားသမားကိုစစ်တိုက်ခြင်း။
Power ချန်ပီယံ PLAY
စမတ်, နည်းဗျူဟာဆုံးဖြတ်ချက်များ Make နှင့်၎င်းတို့၏ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုမြှင့်တင်ရန်အေးမြဂီယာနှင့်သင်၏သူရဲကောင်းများတပ်ဆင်။ သငျသညျလု Skywalker ရဲ့ destination Strike, Darth Vader ရဲ့အင်အားစု Crush နှင့်လူငယ်ဟန်တစ်ကိုယ်တော်ရဲ့ tricks Shot များကဲ့သို့အမိန့်ရွေ့လျားတိုက်ဖျက်မည်အဖြစ်သင့်အဖွဲ့သည်ကိုလညျးမတားဆီးအောင်ပျော်စရာစွမ်းရည် Unlock ။
သင့်ရဲ့စစ်သင်္ဘောအုပ်စုတွေတည်ဆောက်ရန်, ရေတပ်ဗိုလ်ချုပ်ကြီး Ackbar ရဲ့နေအိမ်တစ်ခုမှာကဲ့သို့ထောင်စုနှစ်စွန်ငှက်အပါအဝင်အထင်ကရ starships, နှင့်ကြီးမား Capital ကိုသင်္ဘောစုဆောင်းပါ။ မြန်ဆန်-ပွေးညီအာကာသတိုက်ခိုက်ရေး၌သင်တို့၏အေးမြအောင်ထားပါစစ်ကူလုပ်ငန်းတွေစတင်ဖို့, လက်ျာမဟာဗျူဟာနှင့်အတူစစ်တိုက်ရာဒီရေလှည့်။ ပျော်စရာအသစ်သောစိန်ခေါ်မှုများနှင့်ရင်ဆိုင်ရနှင့်သင့်စွမ်းရည်ကိုစမ်းသပ်ဖို့ရေယာဉ်စု Arena အတွက်ယှဉ်ပြိုင်။ သာသင်္ဘောတိုက်ပွဲများများအတွက်ဆုလာဘ်အဖြစ်ရရှိနိုင်ပါဇာတ်ကောင်များအတွက်ထူးခြားသောအဆင့်မြှင့်ပစ္စည်းများ, ကိုစုသိမ်း။ တစ်ခုချင်းစီကိုရေယာဉ်တစ်ဦးချင်းစီသင်္ဘောများအထူးကျွမ်းကျင်မှုဖြည့်စွက်, ကိုယ်ပိုင်လေယာဉ်အမှုထမ်းများနှင့်မဟာဗျူဟာရှိပါတယ်။ ကတော့ galaxy အတွက်အပြင်းထန်ဆုံး armada ကိုဖန်တီးရန်အစွမ်းထက်လေယာဉ်မှူးစုဆောင်း!
ထိပ်၌ Guilds မှမြင့်တက်
သူငယ်ချင်းတွေနဲ့အတူရှောင်တခင်ဖမ်းဆီးခြင်းဦးဆောင်လမ်းပြခြင်းနှင့်သင်တစ်ဦးစိတ်ကြိုက်အစည်းအရုံးဖန်တီးအခါ Rancor, AAT Tank, နှင့် Sith Triumvirate နဲ့တူအကြီးအကဲတွေဆန့်ကျင်တိုက်ခိုက်တယ်။ အင်္ဂါများတဖြည်းဖြည်းဖြစ်ပေါ်နေသောစစ်မြေပြင်ဆန့်ကျင်ဇာတ်ကောင်များနှင့်သင်္ဘောများမိမိတို့တစ်ခုလုံးကိုအာဆင်နယ်အသင်းတိုက်ဖျက်မည်ဘယ်မှာနယ်မြေတွေကိုစစျပှဲတှငျသငျ့အစည်းအရုံးနှင့်အတူမဟာဗျူဟာဖွဲ့စည်းရန်ပူးပေါင်း။ သငျသညျနယ်မြေတွေကိုစစ်ပွဲအတွက်နယ်မြေများနှင့်ထိပ်တန်းကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာဦးဆောင်အောင်နိုင်အခြား Guilds သည်ဆန့်ကျင်ဂိမ်းထဲမှာချွတ်ရင်ဆိုင်ရတဲ့အခါမှာသင့်ရဲ့ကြီးစိုးပြပါ။
Service ၏စည်းမျဉ်းများ: http://terms.ea.com
ဂိမ်း EULA: http://tos.ea.com/legalapp/mobileeula/US/en/OTHER/
အကူအညီများသို့မဟုတ်မေးမြန်းစုံစမ်းလိုသည်များအဘို့အ http://help.ea.com/en/star-wars-galaxy-heroes/star-wars-galaxy-heroes/ သွားရောက်ကြည့်ရှု။
ရက်ပေါင်း 30 '' အသိပေးစာ www.ea.com/1/servic//e-updates အပေါ် posted ပြီးနောက် EA ၏အွန်လိုင်း features တွေအနားယူလိမ့်မည်။
Star Wars™: Galaxy of Heroes အတြက္ အသံုးျပဳသူ အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား
Star Wars™: Galaxy of Heroes အေပၚ ျပန္လည္စစ္ေဆးမႈမ်ား
Star Wars™: Galaxy of Heroes အေပၚတြင္ ျပန္လည္ စစ္ေဆးမႈ မရွိပါ။ ပထမဆံုး ျပဳလုပ္လိုက္ပါ!
Star Wars™: Galaxy of Heroes အား အခ်က္ျပပါ
ron-lawrence စတိုး 4.08k 1.07M
Star Wars™: Galaxy of Heroes ႏွင့္ အလားတူေသာ အက္ပ္မ်ားကို ေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ
APK အေၾကာင္း Star Wars™: Galaxy of Heroes အခ်က္အလက္
APK ဗားရွင္း 0.16.453784
Release date: 2019-06-18 02:39:32
လက်မှတ် SHA1: C3:CF:54:3F:C2:6E:0F:1C:05:AE:9E:59:37:DA:21:78:53:07:88:36
အဖွဲ့အစည်း (O): Electronic Arts
Star Wars™: Galaxy of Heroes APK ကိုေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ